‘Waan ku waalanahay kubadda cagta xitaa waxaa iga xanaaqda gacalisadeyda! [Muuqaal] – Gool FM
‘Waan ku waalanahay kubadda cagta xitaa waxaa iga xanaaqda gacalisadeyda! [Muuqaal]
Kaafi June 17, 2016
(Manchester) 17 Juunyo 2016. Laacibka khadka dhexe ee Manchester United ayaa waqtigiisa fasaxa ah ku qaadanaya dalkiisa hooyo ee Spain.
Ander Herrera waxa uu ka mid ahaa xiddigihii tirada badnaa ee laga soo reebay safka La Roja u difaaceysa Euro 2016.
Hase ahaatee, durbaba waxa uu bilaabay isu diyaarinta xilli ciyaareedka dambe isaga oo tababaro la sameeyey kooxdiisii hore ee Real Zaragoza – waxa uu maanka ku hayaa la shaqeynta kal dambe tababaraha cusub ee Manchester United kaddib markii uu waqtiyo murugo leh la qaatay Louis Van Gaal.
Wareysi muuqaal ah oo laga qaaday ayuu ku sheegay in uu yahay mid “Taageere waalan u ah kubadda cagta”!
Sidoo kale waxa uu sheegay in uu kulamo badan daawado taas oo kalifta in ay ku xanaaqdo gacalisadiisa.
Herrera oo la wada ogyahay in uu saaxiib dhow ka yahay Juan Mata oo ay Man United ka wada tirsan yihiin ayaa muqaalka ku soo hadal qaaday halka uu qishay in mustqabalka uu maamule ama si uun kubadda cagta uga shaqeyn doono.
I love what I do ⚽️
A video posted by Ander Herrera (@anderherrera) on Jun 16, 2016 at 4:01am PDT
Tababaraha Belgium iyo mid ka mida fureyaashiisa xulka oo dood daran dhex martay guul daradii Italy ka soo gaartay kaddib...(Waa kuma?)
Kartuunka Maanta: England oo dishay DAB SHIDIHII Wales!